Cabdirisaaq Jindi ” Xannibaadda lagu soo rogay duulimaadyada Kismaayo waa daan daansi” – Kalfadhi
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo ka mid ah Xildhibaannada Golaha Shacabka ee Baarlamaanka, kana tirsan Guddiga Maaliyadda ee Golaha, ayaa ka digay xanibaada dhanka cirka ah ee ay xukuumadda Federaalka Soomaaliya ku soo rogtay magaaladda Kismaayo, waxa uuna sheegay in ay ka dhalan karto dhibaato iyo dagaal qabiil.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi oo la hadlay Kalfadhi ayaa sheegay go’aanka Golaha Wasiiradda ee ka dhanka ah Maamulka Jubbaland uu yahay daandaansi iyo xiisad hor leh
“Waa go’aan laga xumaado oo ay ka muuqato xaalad xiisad lagu abuurayo, “ayuu Kalfadhi ku yiri Xildhibaan Jindi.
Cabdirisaaq Jindi ayaa sheegay in ay uga digayaan Xukuumadda Federaalka ah ee Soomaaliya wax kasta oo abuuraya in la kala fogeeyo quluubta dadka Soomaaliyeed, isaga oo ku baaqay in ay dowladda ka laabtaan go’aanka ay Golaha Wasiiradda Xukumadda Federaalka ka qaateen maalinta Khamiista Maamulka Jubaland
“Waxaa nasiib daro ah in Golaha Wasiiradda Soomaaliya ay gaaraan go’aan sidaas u qalafsan xilli uu dhex fadhiyo raysul wasaarii dalka” ayuu hadalkiisa ku daray xildhibaan Jindi.
Xildhibaan Cabdirisaaq Jindi ayaa sheegay in dowladda Soomaaliya looga baahan yahay in ay u turto shacabka Soomaaliyeed meel kasta oo ay joogaan laakiin waxa uu sheegay in hada ay u shaqaynayaan sidaa cagsigeeda oo ay cuna qabataynayaan Maamulo dhisan oo nabad ah.
Kulankii Golaha Wasiiradda ee Xuduudaha Soomaaliya, ay yeesheen Maalintii Khamiista ee toddobaadkaan ayaa waxaa looga soo horjeestay doorashooyinka Jubbaland, waxayna Golaha Wasiiradda isku raaceen in duulimaadka tagaya Kismaayo ay soo maraan magaaladda Muqdisho.